သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အမှာ | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
4 သငျသညျအမြော်အမြင်ရှိရှိအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့အကြံပေးချက်များ | အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း4 သငျသညျအမြော်အမြင်ရှိရှိအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့အကြံပေးချက်များ 1. သငျသညျအသီးအသီးကိုပြုလိမ့်မည်အရာကိုနေ့စဉ်စီမံခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း Make. 2. နေ့အဘို့သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရေးချ. 3.